कोरोना संक्रमण रोकथाम कोषमा योगदान गर्न चाहनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् « TechPana | Digging into Tech
कागजी धन्दा चलाउनेहरु डिजिटल सिस्टमदेखि तिलमिलाएका छन्ः अस्गर
मंगलवार, चैत्र ११, २०७६ २२:५३
अब मोबाइलमा नयाँ फेसबुक, होम पेजदेखि मेनुबारसम्म सबै
लकडाउनमा बालबालिकालाई मोबाइल एपमै निःशूल्क वर्णमाला
एनसेल प्रयोगकर्तालाई मोबाइलमा प्रभु टीभी १ महिनासम्म निःशूल्क
कोरोना ट्रयाकिङ गर्न सरकारले माग्यो प्रयोगकर्ताको सिम र
भायनेटमा साइबर आक्रमण, १ लाख ६० हजारभन्दा बढीको
नेपालमै तयार भयो भेन्टिलेटर
गूगलले तपाईंलाई कसरी निगरानी गर्दैछ ? हेर्नुहोस्, सार्वजनिक
अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा मर्मतमा हिँडेका सवारीसाधनमा अवरोध
यसरी मोबाइलमै गर्न सकिन्छ कोरोनाभाइरसको परीक्षण
नेपालमै पहिलो पटक वर्ल्डलिंकले सुरु गर्‍यो वाईफाई फाइभ,
रिचार्जपछि बोनस पाउनु भएन ? यसो गर्नुहोस्
टेलिकमले रिचार्ज बराबरकै बोनस दिने
एनसेलले ल्यायो आकर्षक योजना सहितको 'सही यो !
कोरोना संक्रमण रोकथाम कोषमा योगदान गर्न चाहनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस्
काठमाडौं । यतिखेर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको छ । विश्वका १८९ देशमा फैलिसकेको यो रोग नियन्त्रणका लागि हरेक देशले अनेक प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले समेत कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विभिन्न प्रयासहरु जारी राखेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन मुलुक नै लकडाउन गरेको सरकारले यसका लागि आवश्यक छुट्टै कोष समेत स्थापना गरेको छ ।
अहिले कोषमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु लगायत निजी क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले समेत योगदान गर्न थालेका छन् । मंगलबार मात्रै निजी मोबाइल सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेलले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यसै क्रममा नेपालकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको ईसेवाले कोषमा आफ्नो तर्फबाट ५ लाख रुपैयाँ जम्ममा गर्दै छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषको नाममा खोलिएको उक्त खातामा देशभरबाट जोकोहीले योगदान दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
माथि तस्विरमा दिइएको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तथा ईसेवाको आईडीबाट सोझै कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक टेस्टिङ किट तथा उपचार सामग्री जुटाउन मद्दत पुर्‍याउन ईसेवाले आफ्नो तर्फबाट ५ लाख उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ ।
खाजामा दान गरिएको रकम खुल्ला रुपमा सबैले हेर्न मिल्ने समेत बनाइएको छ । यो समाचार तयार पर्दासम्म कोषमा ५ लाख ९ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको थियो । दाताहरुलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराए वापत सम्मान स्वरुप प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था ईसेवाले मिलाएको छ ।
खातामा पछिल्लो समयसम्म जम्ममा भएको रकम हेर्न तथा दान गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कोरोना ट्रयाकिङ गर्न सरकारले माग्यो प्रयोगकर्ताको सिम र मोबाइलको जानकारी
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसका संभावित संक्रमित ट्र्याकिङका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग चैत महिनाको सिम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज नै डिलिट भएको पाइएको छ । बिहीबार बेलुकी आठबजेपछि
खाने पानी सकियो ? अनलाइनबाटै यसरी मगाउनुहोस्
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा छ । सरकारले घरबाट बाहिर निस्किन समते बन्देज
कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन ७ परियोजनामा बिल गेट्सको खर्बौं सहयोग
काठमाडौं । कोभिड-१९ अर्थात कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिन तयार पार्न माइक्रोफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले अहिले विभिन्न परियोजनालाई